Ikhibhodi yeHyperX Alloy Core negundane lePulsefire Core, ukubuyekeza okujulile | Izindaba zegajethi
UMiguel Hernandez | 02/09/2021 13:34 | Kubuyekezwe ku- 02/09/2021 13:40 | Imincintiswano, General, Izibuyekezo
Izesekeli eziqanjwe igama Ukudlala ziwumkhiqizo odingeka kakhulu yilabo abachitha izinsuku ezinde zobumnandi phambi kwesiqaphi, ngakho-ke, igundane elihle nekhibhodi ekhethekile yizinto ezibalulekile zokuthola imiphumela emihle ntambama yethu ende yempi yedijithali. I-HyperX Kade inikela ngemikhiqizo esezingeni eliphezulu kubadlali bamageyimu abaningi iminyaka, futhi lezi esizihlaziya namhlanje yizinto ezimbili eziyisisekelo ezingalahleka ekusethweni kwakho.
Sikukhombisa ikhibhodi ye-Alloy Core negundane lokudlala lePulsefire Core kusuka kuHyperX ukuze ukwazi ukukhombisa amakhono akho ngamathuluzi amahle kakhulu. Njengokungathi lokho bekunganele, ngaphezulu kwalokho ungakuthola mahhala mahhala ngalengxenye ye-raffle esikwenzela yona, ngabe uzophuthelwa yiyo?
Sisanda kufinyelela ababhalisile abayi-10.000 XNUMX ku-YouTube, lapho ungathola khona ukuhlaziywa okuhle kakhulu nezifundo zethu, ngakho-ke sinqume ukuyigubha kanye nani nonke ngesandla sika I-HyperX, inkampani ibifuna ukusebenzisana ngokusinikeza ikhibhodi Ingxubevange Core negundane Umgogodla we-Pulsefire, imikhiqizo yayo emibili ebaluleke kakhulu yokusetha okuhle, ngakho-ke sikushiya lapha ukuhlaziywa komkhiqizo ngamunye, futhi ngaphezu kwakho konke Sikumema ukuthi ubambe iqhaza kule ngqungquthela, futhi sikushiya ngaphansi kwemibandela yokubamba iqhaza:
Ngabe ufuna ukunqoba lekhibhodi yegundane negundane le- @NomzamoMbatha? Bamba iqhaza kwesethu #dweba bese uthola igundane lokudlala lePulsefire Core nekhibhodi ye-Alloy Core.
- Amazwana: #HyperXActGadget#Lottery #Gaming #HyperX #Amagajethihttps://t.co/UzTO2w2DGA
1st landela i-HyperX ne-ActualidadGadget ku-Twitter
2nd ubhalisele isiteshi se-YouTube se-ActualidadGadget
Okwesithathu Nikeza i-RT kutwitter yokudweba
Amazwana wesine nge-hashtag #HyperXActGadget
5th Uzothola ukubamba iqhaza okwengeziwe uma uphawula ngevidiyo
Sibhekene nokuqhathwa kukazwelonke, owinile kumele abe nokuhlala endaweni kazwelonke (eSpain). Sizonikeza owinile kokubili kumazwana evidiyo ye-YouTube nange-akhawunti yethu ye-Twitter. Owinile kulo mqhudelwano uzomenyezelwa kuRRSS nesiteshi sethu ngomhlaka 10/09/21 ngo-12: 00 amahora.
1 Ikhibhodi ye-HyperX Alloy Core
2 Igundane Le-HyperX Pulsefire Core
Ikhibhodi ye-HyperX Alloy Core
Lekhibhodi ye-membrane I-HyperX unezinye ubukhulu 443,2 amamilimitha ububanzi; Amamilimitha ayi-175,3 ukujula namamilimitha angama-35,6 ukuphakama, ngaleyo ndlela sithola ikhibhodi enosayizi ogcwele, okungukuthi, phakathi kwezikhiye ezingama-104 nezili-105 ngokuya ngamazinga ezimakethe. Mayelana ne- isisindo, okungaphezu kokhilogremu ukukuxazulula kahle etafuleni (ikakhulukazi amagremu ayi-1.121).
Sikhuluma ngekhibhodi enekhebuli eboshiwe, enobude obungamamitha ayi-1,8, ngokwanele ukuthi sikwazi "ukufihla" izintambo kahle ngokusetha kwethu futhi zikwenze kukhanye ngangokunokwenzeka.
Mayelana nemininingwane yezobuchwepheshe, siyakhumbula ukuthi ikhibhodi yolwelwesi, inokuxhumeka I-USB 2.0 nejubane lokuvota elingu-Hz elingu-1.000 XNUMX. Ngokusobala inesistimu yokulwa nokungenisa okhiye abaningi futhi ngasikhathi sinye inokhiye abazinikele bokulawulwa kwe-multimedia.
Sine «imodi yomdlalo» ukukhulisa izici, futhi njenganoma iyiphi ikhibhodi enhle Ukudlala ulwelwesi, sibhekene nekhibhodi emelana nokuchithwa kuketshezi. Siphinde sibe nochungechunge lwezinkinobho zokufinyelela ngokushesha esivumela ukuthi silungise ukukhanya, izindlela zokukhanyisa nemodi yegeyimu, into esiyithokozelayo lapho sisebenzisana namamenyu ahlukile okonga isikhathi.
Singakwazi ngisho, uma sifisa, ukukhiya ikhibhodi. Inebha yokukhanya enemiphumela eyisithupha esethiwe ngaphezulu: Umjikelezo wombala, i-spectrum wave, ukuphefumula, okuqinile, izindawo ezinhlanu, ne-aurora. Konke lokhu kukhanya nakho kudluliselwe endaweni eyisihluthulelo, bese ikhanyiswa ngokufana, kepha uma sithanda, nge-software singakwazi ukulungisa izinkinobho ngokuzimela. izindawo ezinemibala emihlanu.
Ukuba ikhibhodi yolwelwesi, kunikeza impendulo enhle futhi-ke umehluko ophawulekayo kusuka kumakhibhodi wokukhanda, iqiniso lokuthi lithule ngokwedlulele. Ngendlela efanayo, ukuhamba kwezinkinobho kufana kakhulu nekhibhodi yemishini futhi kunempendulo esheshayo. Lekhibhodi, ngaphezu kokuhambisana kweWindows, Iyahambisana nePS4, PS5, Xbox Series X / S neXbox One. Ngaphandle kokungabaza, enye indlela ethakazelisa kakhulu ezungeze ama-euro angama-50 kuwebhusayithi esemthethweni ye- I-HyperX futhi ku Izitolo ezijwayelekile.
Igundane Le-HyperX Pulsefire Core
Igundane libaluleke noma libaluleke ngaphezu kwekhibhodi enhle, ngakho-ke manje siyaqhubeka nokuhlaziya umlingani ophelele, iPulsefire Core kusuka I-HyperX. Sinegundane le-ergonomic elilinganayo elinobukhulu be- Amamilimitha ayi-119,3 ubude, ngamamilimitha angama-41,30 ukuphakama namamilimitha angama-63,9 ukuphakama. Isisindo, uma singabala ikhebula yilokho 87 amagremu, ngentambo ikhuphukela kuma-gramu ayi-123, ngakho-ke leli gundane likhanya kancane ngaphakathi kwengxenye yalo.
Ikhebula, imininingwane ebalulekile, Ingamamitha ayi-1,8 ubude, ukwazi ukuthola ukuhamba futhi uzivumelanise kalula nezidingo zokusetha kwethu. Le ntambo ye-USB ubuchwepheshe be-2.0.
Yenza ukusebenza ngenzwa IPixart PAW3327 ngokulungiswa kwe-6.200 dpi nochungechunge lokusetha kabusha ngenkinobho ephezulu ye-800/1600/2400/3200 ne-XNUMX dpi ngokuya ngokunambitheka komsebenzisi ngamunye. Ijubane lingu-220 IPS kanti ukusheshisa okuphezulu kungu-30G. Masidubule izinkinobho eziyi-7, eziqinisekisa isikhathi sokuphila sokuchofoza okuyizigidi ezingama-20.
Amalambu abengekho Ama-RGB LED anendawo eyodwa yokukhanyisa namazinga amane okukhanya ukuze sikwazi ukuyilungisa ngokuya ngokuthanda kwethu noma ngezidingo zethu. Ngokwengxenye yayo, ine- Izinga lokuvota elingu-1000 Hz nefomethi yedatha ye- 16 izingcezu / i-eksisi. Njengekhibhodi eyedlule, le gundane iyahambisana ne-PC, kanye ne-PS5, PS4, Xbox Series X / S ne-Xbox One, ngakho-ke ukuhambisana akufanele kube yinkinga.
Sine uchungechunge lweziketi ezinosayizi ovelele nokuthi unezingxenye zokungcebeleka ebhokisini uqobo. Kuyafana nekhibhodi, isoftware yokulanda mahhala I-HyperX NGenuity Kuzosivumela ukuthi senze noma yikuphi ukulungiswa, ikakhulukazi ekwenzeni ngokwezifiso ukukhanyisa. Izinkinobho zayo eziyisikhombisa nazo zihlelwa ngokuphelele. Ngokwengxenye yalo, igundane linentengo elinganiselayo ezohlala cishe kuma-euro angama-35 kuwebhusayithi esemthethweni ye- I-HyperX futhi ku ezinye izitolo.
Ikhibhodi efanelekile negundane lenhlanganisela yabadlali abaningi ngamanani aphansi, Yini oyilindele ukuze ubambe iqhaza ku-raffle yethu futhi uthole le pakhi yekhibhodi negundane mahhala ngokuphelele? Ungalahli leli thuba.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izibuyekezo » Ikhibhodi ye-HyperX Alloy Core negundane le-Pulsefire Core, abangane bokudlala abaphelele [SWEEPSTAKES]
Ukubamba iqhaza ku-raffle